‘छक्का पञ्जा ३’ को प्रमोसनल गीत सार्वजनिक (हेर्नुहोस भिडियो सहित).... - Everest Media News
Home भिडियो ‘छक्का पञ्जा ३’ को प्रमोसनल गीत सार्वजनिक (हेर्नुहोस भिडियो सहित)….
‘छक्का पञ्जा ३’ को प्रमोसनल गीत सार्वजनिक (हेर्नुहोस भिडियो सहित)….
In: भिडियो, मनोरञ्जन
यस बर्षकै बहुप्रतिक्षित मानिएको फिल्म छक्का पञ्जा ३ घटस्थापनको दिनबाट रिलिजमा आउँदैछ । सुरुवातबाट नै चर्चामा रहँदै आएको छक्का पञ्जा ३ को गीतपछि टे«लरपछि दर्शकमाझ यसले झनै कौतुहल्ता जगाएको छ । यसबीचमा फिल्मको प्रमोसनल गीत सार्वजनिक गरिएको छ ।
फिल्ममा समाबेश १ मिनेट २१ सेकेण्डको गीतलाई “पहिलो नम्बरमा” कै संगीतमा तयार पारिएको छ । दीपक शर्माको संगीत ,केदार घिमिरेको शब्दमा रहेको गीतमा डेबिड शंकरको स्वर रहेको गीतमा दीपाश्री निरौला, केदार घिमिरे, दीपकराज गिरी र जितु नेपालले र्‍याप हानेका छन् । ।
फिल्ममा दीपकराज, दीपिका प्रसाईं, केदार घिमिरे, जितु नेपाल, शिवहरी पौडेल, बुद्धि तामाङ, लक्ष्मी गिरीलगायत कलाकारहरुको अभिनय छ । प्रियंका कार्की, स्वस्तिमा खड्का, बर्षा राउत र संजोग कोइराला अतिथी भुमिकामा रहेका छन् ।
आमा सरस्वती मुभिज र आईएमईएको संयुक्त प्रस्तुति रहेको फिल्ममा कथा दीपक आफैंले लेखेका हुन् । फिल्ममा केदार घिमिरे (माग्ने बुढा) र जितु नेपाल (मुन्द्रे) कार्यकारी निर्माताको रुपमा छन् । अब हेरौँ यसले आफना अिघल्ला सिरिवको कलेक्सन रेकर्ड तोड्न कत्तिको सफल हुँन्छ ।
२ बर्षपछि एक्सन लुक्समा म्युजिक भिडियोमा देखिईन् साम्राज्ञी (भिडियो सहित)…
सुनिल गिरीले रिलिज गरे ‘परदेशी’ गीत हेर्नुहोस भिडियो..
नयाँ ट्रेलरमा यस्तो देखियो ‘एक्वाम्यान’ हेर्नुहोस…..
‘दि कर्मा’को रिलिज मिति सार्‍यो, माघ ४ मा रिलिज हुने….